China Waste Tyre Crushing Equipment orinasa sy mpanamboatra | LYBH
Ny tsipika famokarana kodiarana fanodinana fako dia fitaovana feno lehibe feno izay manasaraka tanteraka ireo akora telo lehibe ao anaty kodiarana: fingotra, tariby vy ary fibre amin'ny hafanan'ny efitrano ary mahatsapa fanodinana 100%. Ny tsipika famokarana kodiarana fanodinana fako dia afaka manamboatra kodiarana ao anatin'ny 400-3000mm isaky ny savaivony arakaraky ny takian'ny mpanjifa, miaraka amin'ny fampiharana azo antoka, ny haben'ny vokatra dia azo fehezina ao anatin'ny 5-100mm, ary ny vokatra dia mety hahatratra 200-10000kg / h . Ny tsipika famokarana dia mandeha amin'ny hafanan'ny efitrano ary tsy hiteraka fandotoana faharoa amin'ny tontolo iainana. Ny tsipika famokarana dia mandray ny rafitra fanaraha-maso PLC, izay mora ampiasaina sy mitazona, miaraka amin'ny fanjifana angovo ambany sy ny androm-piainana maharitra.
Crusher fanetezana volo roa
Ny crusher fanetezana moto roa-axe manan-tsaina dia manana ny mampiavaka ny hafainganam-pandeha ambany sy ny tsela lehibe, izay afaka manapotika ny kodiaran'ny fako amin'ny habe rehetra ary miantoka ny fiasan'ny fitaovana maharitra. Ny fitaovana fanapahana dia vita amin'ny vy mahery alika avy any Eropa, ary ny firafitry ny fanapahana roa sosona dia natao miaraka amin'ny fanoloana azo esorina, izay manatsara ny tahan'ny fampiasana ny fitaovana fanapahana. Ny fanorotoroana marokoroko sy ny fanosehana tsara dia voahodina amin'ny faritra samihafa amin'ny boaty antsy iray miaraka aminy mba hamonjy ny fanjifana angovo sy hampiasana toerana.
Amin'ny alàlan'ny antsy mihetsiketsika sy antsy amboarina mba hanapahana ny barazo lakaoly, fantsona vita amin'ny kodiarana mahay sy tariby vy amin'ny alàlan'ny sieve, ireo fitrandrahana fingotra tsy misy kalitao sy tariby vy dia mbola mijanona ao amin'ny faritra fanorotoroana noho ny fanorotoroana; Ny efijery dia mahatonga ny fikojakojana sy ny fanoloana ny fitaovana fanapahana sy ny efijery mety kokoa. Ny endrika symmetika antsy mandroso sy antsy raikitra dia afaka mahatsapa ny fiovan'ny làlan'ny fanapahana efatra ary manatsara ny fiainam-panompoan'ny fitaovana. manapaka, ary mbola azo ampiasaina aorian'ny fanamboarana azy io.
Ny habakabaka amin'ny sehatry ny fitaovana dia voatsabo miaraka amin'ny delusting, izay afaka mahafeno ny fepetra fanoherana ny harafesin'ny asa maharitra mandritra ny fotoana maharitra eo ambanin'ny tontolo manokana toy ny fandotoana ny fako. Izy io dia manana anjara asa fanaraha-maso marani-tsaina toa ny fanombohana sy fijanonana lavitra, fijanonana vonjy maika, hafainganana ary be loatra.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fitsipiky ny fiasa mihodina amin'ny fitaovana misaraka amin'ny habe samihafa amin'ny fizahana fitaovana, ny efijery ambany dia azo amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny elanelan'ny kapila hahafeno ny fepetra takiana amin'ny famoahana ny haben'ny sombiny. Ny efijery ambony izay tsy mahafeno ny fepetra takiana dia haverina amin'ny rafi-pamotehana mba hamerenana indray mandra-pahafenoany ny fepetra takiana amin'ny famoahana ny haben'ny sombiny. Ny kapila dia vita amin'ny akora fitambarana polymerika nafarana izay tsy mora simba ary azo ampiasaina amin'ny karazan'asa ratsy rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ny endrika maodely azo volavolaina sy ny fikirakirana miovaova amin'ny fikirakirana ny fahaiza-manao, ka ny fitaovana amin'ny fizahana fizahana dia tsy dia manangom-bokatra na mihodina, ny fikojakojana ny fitaovana dia tsotra sy haingana kokoa.
Ny karazan'ilay mpampisaraka andriamby dia karazana manala tena maharitra, izay afaka manara-maso tsara ny tariby vy aorian'ny fisarahana.
Ny tariby vy dia misaraka amin'ny tady goavambe / tariby vy amin'ny herinaratra. Ny sombin-tsolika / vovoka vita amin'ny vy vita amin'ny vy ihany no mahafeno ny fepetra takiana fa afaka mandalo ny efijery eo ambanin'ny efijery mihetsiketsika. Ny granules lehibe vita amin'ny rubber dia tsy afaka mamakivaky ny sieve sy ny tariby vy dia alefan'ny mpampita fehikibo mankany amin'ny mpampisaraka tariby vy ho an'ny famotehana faharoa mandra-pahatongany amin'ny fenitra.
Ny kabinetra fanaraha-maso lehibe sy ny sehatra fanaraha-maso dia tsy miankina amin'ny tsirairay. Ny famolavolana ny efijery fanalahidy sy ny fomba fanaraha-maso ny bokotra dia mahatonga ny interface fanaraha-maso ho lasa olombelona sy ho mora ampiasaina. Ny maody mandeha ho azy dia afaka mahatsapa ny fandidiana tsy mitantana, ny maody amin'ny tanana dia afaka mifehy fitaovana iray, ny mpampiasa dia afaka misafidy fomba hafa hiasa arakaraka ny filàna tena ilaina amin'ny fotoana rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ny rafitra koa dia misy fanairana amam-peo sy hazavana, fampahatsiahivana momba ny lesoka, fampahatsiahivana fikojakojana fitaovana ary asa hafa manan-tsaina, mba hahafahan'ny mpampiasa amin'ny fizotran'ny fanaraha-maso fitaovana mety sy haingana kokoa, mahita ary miatrika lesoka, mamita ny fikojakojana asa. Ny fitaovana fanaraha-maso horonantsary feno dia afaka mifampiresaka amin'ny rafitra fanaraha-maso afovoany sy manara-maso ny toetoetran'ny fitaovana amin'ny tena izy.
1.Drafitra modely, dian-tongotra kely
Ny tsipika fampitaovana dia manaraka ny fitsipiky ny fampiasana tany misy antonony sy mahery, manangana ny firafitry ny firafitry ny crusher shear-shaft roa sy ny efijery roller, ary ny layout mety, izay tsy afaka miantoka ny fivoahana sy ny haben'ny famoahana azy ireo. fepetra takiana, nefa koa mahafeno ny drafitra sy ny filan'ny fanamboarana ny famokarana sy ny fitantanana ny kodiaran'ny mpanjifa.
2.Indegral antsy tranga famolavolana, milamina sy azo antoka
Aorian'ny fitsaboana hafanana, ny boaty fitaovana dia mafy orina sy mahatohitra, izay miantoka ny tanjaka mekanika tsara kokoa, manalava ny androm-piainan'ny fitaovana ary mampihena ny vidin'ny fikojakojana.
3.Fiatrehana antsy tsy azo esorina, fanoherana mahery vaika
Ny mpanapaka voafaritra tsirairay dia azo esorina sy hapetraka tsy miankina, izay azo esorina ary vitaina haingana ao anatin'ny fotoana fohy, mampihena be ny asan'ny mpiasa ary manatsara ny fitohizan'ny famokarana.
4.Ny famolavolana fitaovana tsy manam-paharoa, mora tazonina sy manolo
5.tanjaka hery spindle, fanoherana havizanana mahery ary fanoherana ny fiantraikany
Ny ampela dia vita amin'ny vy mahery firaka. Taorian'ny fitsaboana hafanana marobe sy ny fanodinana avo lenta, dia manana tanjaka mekanika tsara izy io, fahaiza-manohitra havizanana ary fanoherana ny fiantraikany ary fiainana maharitra.
6.Imported bearings miaraka amina tombo-kase mitambatra
Fanafarana mitondra tombo-kase sy tombo-kase mitambatra, fanoherana avo lenta, fiainana lava, vovoka, tantera-drano sy antifouling, hiantohana ny fiasa mitohy sy maharitra ny masinina.
a. Fananganana teknolojia fantsom-boaloboka mandeha ho azy
b. Ny welding rehetra dia ho voamariky ny fomba fitiliana nondestructive ultrasonic mba hiantohana ny kalitaon'ny welding sy ny
a. Standard emission: fananganana mpanosotra gazy manokana hanala ny gazy asidra sy ny vovoka amin'ny setroka
b. Maimbo mandritra ny fandidiana: mihidy tanteraka mandritra ny fandidiana
d. Fandotoana mafy: ny matevina aorian'ny pyrolysis dia ireo tariby mainty sy vy misy karbonika azo zahana lalina na amidy
mivantana miaraka amin'ny sandany.
Teo aloha: Fitaovana fanorotoroana plastika
Manaraka: Fitaovana fikolokoloana mainty karbaona
Antsipiriany momba ny vokatra: Rafitra pretreatment (nomen'ny mpanjifa) Aorian'ny fikojakojana rano, fanamainana, fanorotoroana ary ireo dingana hafa ireo plastika fako dia afaka mahazo habe mety izy ireo. Rafitra famahanana Ireo plastika fako efa namboamboarina dia alefa any amin'ny fitoeran'ny tetezamita. Rafitra pyrolysis mitohy Ny plastika fako dia ampidirina ao amin'ny reaktor pyrolysis hatrany amin'ny alàlan'ny feeder for pyrolysis. Rafitra fanamainana Ny solika fanamainana no tena ampiasain'ny solika fanafanana entona mora entina azo avy amin'ny pyrolysis an'ny maloto ...
Fambolena Pyrolysis mitohy, Batch Pyrolysis Plant, Fanadiovana plastika maloto, Masinina fanodinana fako, Masinina fanodinana plastika, Tyro Pyrolysis,